Dargaggoo 'Youtube' qofaan afaan Chaayinaa barate - BBC News Afaan Oromoo
Afaan kana dura tasuma hin barre tokko YouTube qofaan yeroo gabaabaatti baranii Turjumaana tahuun ni dandahama jettanii yaadduu?
Dargaggoo Yaareed Ammahaa karaa YouTube qofaan Afaan Chaayinaa ykn Mandariin barachuu isaatiin kampaanonni hojiif isa barbaadan dabalaniiru.
Dargaggoo Yaareed Ammahaa Digirii jalqabaatin yunivarsiitii Haramayaa irraa eebbifamullee waan barate kanaan waggoota lamaaf carraa hojii argachuu hin dandeenye.
Daa'imni waggaa torbaa YouTube'n dolaara m22 argachaa jira
'Youtube' viidiyoowwan qabiyyee barnootaa qabaniif doolaara mil. 20 ramade
Baasii interneeta mobaayila keessan hir'isuuf...
Kanaafis naannoo Alamganaatti hoteela tokko keessatti keessumeessaa ta'ee hojjechuu hima.
Hoteelichatti kutaa simannaatti akka ramadame kan himu dargaggoon kun chaayinoota waliin carraan walarguu bal'aa qaba ture.
"Isaan afaan Ingiliffaa sirritti hin danda'an, animmoo afaan Chaayinaa hin danda'u ture. Hojii sanammoo dhabuu waan hin barbaannef dirqama afaanicha dhuunfaadhaan baruutu narra ture" jedha.
Jalqabarratti jechoota guyyaa guyyaadhaan itti dhimma bahu kan akka Siree, nyaata, dhugaatii, na gahee fi kanneen biroo barachuu hima.
Jechootni muraasa barate kunis hariiroo chaayinoota waliin qabu waan isaaf cimsee fi hamilee isatti uumee barachuu isaa daran cimsee akka itti fufe dubbata.
"Barnoota afaanichaa Youtube irraa buufadheen gara manaatti gala. Isa nan dhaggeefadha, barreefamattin jijjiirachaa baradha. Isan barreesses irra deddeebi'een dubbisaa dhuunfaa kiyyaan afaanicha baradhe."
"Amma Afaanicha guutumaatti nan dhagahas nan dubbadhas. Kanin baradhes guutumatti Youtube fi intarneetii qofa irraayi."
Afaanichi akkaataa itti sagaleeffamuu afur qabaachuu fi kan sagaleen bu'aa dubbifamu, kan olba'u, kan olba'ee gadi bu'uu fi kan sagalee qixa ta'een dubbifamudha jedha.
Qixa itti sagaleeffamu kana dogoggoruun dogoggora hiikaa waan qabuuf of-eegannoo fi sirritti baruu nama barbaachisa jedha.
Yaareed yeroo amma kaampaanii Chaayinaa 'Xinmaotai' jedhamu keessatti turjumaana ta'ee hojjechaa jira.
Hojii isaa guyyuu keessattis marii chaayinootni hojjettoota waliin taasisan gara lamaanitti hiikuu, mana murtiitti, gumuruukii fi seektarota mootummaattis afaan kana hiikee gartuu lamaan wal-hubachiisa.
Sababa Afaan kana barateef dargaggoon kuni amma hojii keessumeesummaa hoteelaa sana dhiisee turjumaana kaampaaniwwan barbaadanii fi hojii filatee hojjeta.
Jaalallee tokko jalaa hatee, ishee biraa ittiin bohaarsuuf
"Afaan Chaayinootaa kana baruu kiyyaan tokkoffaa afaan kana gaafan dubbadhu bakka ka'e sana waanin yaadadhuuf na gammachiisa. Lammatammoo hojjedhee mindaa gaarii ittiin argachaatiin jira. Ofii kiyyaaf carraa hojii ofii uumuun kiyya na gammachiisa."jedha.
Barbaadamummaa amma qabu wayita ibsus, "yeroon digiriidhaan eebbifame hagam hojii argachuuf akkan dhama'e nan beeka" jedha.
"Afaan kana ergan baree asitti hojii filadheetin kan caalaa siifan kaffala jedhu bira hojjedha. Haguma Chaayinoota waliin wal-argu carraa hojii nan argadha. Kaampaanonni na barbaadanis dabalaniiru.''
Fuula duraafis hojii Youtube dhaan afaan biyya alaa barachuu kana akka itti fufu himeera.
"Amma Afaanota addunyaarratti bal'inaan dubbataman sagal ragaalee walitti qabadhee qophaa'atiin jira. Isaan keessaa Afaanotni Shan karoora yeroo dhihooti " jedha.
Afaanota akka Fireench, Ispaanish, Afaan Arabaa, Kiswaahili ammoo warra karoora yeroo gabaabaa keessatti karaa Youtube baruuf qabate ta'uu hime.
"Waggaa shanan har'aa afaanota biyya alaa Afan Inigilizii fi Afaan Chaayinaatin alatti Afaanota shan nan baradha jedhee Abdiin qaba. Akkan gochuu danda'us ofittan amana, hamilee cimaadhaanis hojiitti seenera" jedhe Yaareed.
Afaan tokko Barachuufis ji'a jahaa hanga wagga tokkoo akka itti fudhatus himeera.
YouTube irratti namoota hunda caalaa argachaa jiran: Daa'imni waggaa torbaa dolaara miliyoona 22 argata